UMongameli waseNigeria u-Muhammadu Buhari uyavuma ukuthi ezokuphepha 'ziyakhathaza kakhulu' - izingcingo ze-teles
UMongameli waseNigeria u-Muhammadu Buhari uyavuma ukuthi ezokuphepha "ziyakhathaza kakhulu"
By brylandobe On Agasti 1, 2020
UMengameli waseNigeria u-Muhammadu Buhari uthe abezokuphepha bangenza kangcono kakhulu emizameni yabo yokugcina izwe liphephile.
Engxoxweni eyivelakancane, uMnu Buhari uchaze isimo esifundeni esenyakatho nephakathi ngokuthi "sikhathazeke kakhulu".
"Ngicabanga ukuthi amasosha, amaphoyisa nezinye izinhlaka zokuqinisa umthetho, ngemibiko engiyitholayo, ngicabanga ukuthi bangenza kangcono kakhulu," kusho yena ecashunwa yile nhlangano. Ukukhishwa kwabezindaba kwe-AFP.
I-Ivory Coast: Kufe abangu-4 ngenxa yobudlova obuxhumene ne ...
Ukushayeka kwe-Drone yaseMelika enyakatho yeNiger!
UBuhari waqala ukubusa eminyakeni emihlanu eyedlule ethembisa ukunqoba amaBoko Haram amaSulumane enyakatho-mpumalanga, kepha ubuphekula buyaqhubeka.
Udlame lobuhlanga nobugebengu, kubandakanya nokuthumba kanye nokuhlaselwa kwezinkomo, luyanda ezifundeni ezisenyakatho nentshonalanga.
Ngesonto eledlule, iSenethi lidlulise isinqumo esifuna abaholi bezempi bashiye phansi noma badilizwe ngenxa yesimo esibi sokuphepha.
Le ndatshana yavela okokuqala ku: https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452
UMongameli waseNigeria u-Muhammadu Buhari uyavuma ukuthi ezokuphepha 'ziyakhathaza kakhulu'
brylandobe 1148 izikhala 0 amazwana
abaculi bafuna imvume kosopolitiki abasebenzisa izingoma zabo ngesikhathi semikhankaso yezepolitiki
Isikebhe esivela kwamanye amazwe "sihamba izinsuku ezintathu eMedithera"
I-Ivory Coast: Kufe abangu-4 ngenxa yobudlova obuxhunyaniswe ekuvezweni kwe ...
Kubulawe abantu abathathu eBakistan ngenxa yesikhundla sikaMprofethi uMuhammad